Tattoo xariiqda gacanta: fikradaha, macnaha iyo inbadan | Tattoo
Tattoo-xariiqa qaar ee gacanta
Susana godoy | | Tattoos leh qaabab, Tattoo gacanta
Ma waxaad raadineysaa tattoos gacanta? Wax yar ka hor usbuuc ka hor ayaan horay uga soo hadalnay Tattoos yar. Oo waxaan u maleynayaa in naqshadaha tattoo-ka ee aad maanta ku arki karto Tattoo raac mawduucan, si kastaba ha noqotee, waxaan u maleynayaa in fududaanta (qaabka) iyo xarrago ay u gudbinayaan gaar ahaan, Tattoo xariiqa. Iyo of Khadadka gacanta maanta ayaan kahadleynaa. In kasta oo ay u muuqan karto sida tattoo aad u fudud in la sameeyo, haddana wax run ah kama sii fogaan karaan.
Dhawaan waxaan lahadlayay dhowr farshaxanno tattoo ah waxaa laga faallooday inay jiraan farshaxanno badan oo tayo leh oo diida inay sameeyaan noocyada noocan oo kale ah tillaabooyinkooda awgood. Sameynta "goobaabin" taas oo ah, marka la soo koobo, waxa xariiqyadan ku wareegaya gacanta gebi ahaanba ay matalayaan aad ayey u adag tahay. Iyo xitaa intaa ka sii badan markaa isku day inaad si buuxda u toosiso oo aanad qalloocin.
Xitaa sidaas oo ay tahay, waxaan u maleynayaa in aqlabiyadda badan ay aniga igu raaci doonaan in natiijada nooca noocan oo kale ah ee tattoo ay na siiso ay tahay si siman mid damiir iyo xarrago leh. By habka, waxaa la sheegay in noocan ah tattoos on ragga waa la xiriira dunida gay, laakiin dhab ahaantii ma jirto sabab cad in laga fikiro. Waxaan wali wajaheynaa halyeey cusub oo reer magaal ah (inkastoo xaqiiqda ah in nuucyo badan oo khaniis ah ay sameeyeen sida tattoo).
Waxaan ku iri, Waxaan rajeynayaa inaad sidan jeceshahay gallery of tattoos line on gacanta. Haddii aad aqbasho, waxaan ku sameyn karnaa isku-soo-koob kale oo noocan ah tattoos-ka ah qayb kale oo jirka ka mid ah.
1 Micnaha taatikada xariiqda gacanta
2 Aaggee gacanta ah ayaan ku sameeyaa tattoo?
3 Hababka Tattoo-ka xariiqa
4 Sawirada Tattoos ee gacanta oo leh Khadadka
Micnaha taatikada xariiqda gacanta
In kasta oo aan ognahay in tattoos badan aysan macno u lahayn naftooda, had iyo jeer waxay yeelan doonaan xoogaa calaamado ah ama kuwo kale. Waa run in xaalado badan aan noqon doono kuwa siin kara macnahaas. Qof walba wuxuu aaminsan yahay ama waaya aragnimada shaqsiyeed wuxuu u horseedi karaa natiijo u gaar ah.
Xaaladdan oo kale, waxaan ka hadlaynaa a astaan ​​dambiyeed. Waqti dheer kahor, dadka dambiga galay waxaa lagu calaamadeeyay astaamo aad ugu eg laymanadan. Dabcan, sidaan nidhaahno, waqtigu wuu dhaafay haddana waa, waa erey isku mid ah oo iska cad oo loo yaqaan 'minimalism'. Intaa waxaa dheer, waxay cadeyneysaa in xarrago iyo dhadhan fiican ay isla socdaan. Haddii aad jeceshahay qaab sidan oo kale ah, ha ka shakin inaad adigu keligaa yeelan doonto ereyga ugu dambeeya markay u tahay macnayaasha.
Aaggee gacanta ah ayaan ku sameeyaa tattoo?
Haddii aad horeyba u cadahay in xariijimaha xariiqda ay noqon doonaan xulashadaada, hadda waa inaad doorataa booska ay ku leeyihiin gacanta.
Gacmo: Waa mid ka mid ah Tattoo badan oo taxaddar leh laakiin isla markaa ka casrisan kuwa aan haysanno. Boombalada marwalba waxay taageertaa nashqadahaas fudud ee leh macno badan laakiin aan weynayn. Khad ama laba ka mid ah ayaa ku habboon aaggan.
Dhudhun: Halkan waxaad ku sharxi kartaa naqshad la mid ah. Laba sadar oo wada fiican Iyagu waxay noqon karaan xulashadaada ugu fiican, in kasta oo ay tahay inaadan iloobin inay sidoo kale aad u badan tahay in la arko sida laba xariiq oo ballaadhan ay ula jaan qaadayaan aaggan. Waxay umuuqan doontaa inaad xiraneyso jijin fiican.
Aagga gudaha: Nooc asal ahaan ah, waxaan sidoo kale la kulannay a xariiqda iskutallaabta kor ilaa hoos gacanta oo dhan. Dabcan, had iyo jeer gudaha aagga gudaha.
Hababka Tattoo-ka xariiqa
In kastoo mid ka mid ah qaababka ugu waaweyn ee kiiskan, taasi waa taas Khadadka ayaa qurxiya hareeraha gacanta. The tattoos sida jijin Iyagu waa mid ka mid ah aasaaska weyn ee noocan ah. Laakiin maadaama aan inta badan raadino asalka, markaa xulashooyinka ayaa sii wadi doona inay aad uga duwan yihiin sida aan filayno.
Khadadka dhaadheer: Waxaad dooran kartaa nooc ka mid ah jijin kaas oo ka koobnaan doona laba sadar oo ballaaran oo daboolan. Dabcan, haddii aad u aragto waxoogaa caajis ah, waxaad had iyo jeer dooran kartaa kala duwanaansho aan ka wada hadalnay. Mawjadaha qaar ayaa loo oggol yahay inay ka boodaan xeerka isku midka ah.
Khadad aad u fiican: Hadaad dooratid khadadka ugufiican, markaa hubaal waxaad heli doontaa in kabadan hal tattoo iyo xitaa in kabadan labo. Waad ku dhejin kartaa meel aad u dhow sidoo kale waxay abuuri doontaa saameyn qumman oo jilicsan.
Khadadka midabkaIn kastoo markii laga hadlayo qaabka ugu yar, had iyo jeer khad madow ayaa ku filan. Dabcan fikrado ayaa laga qabaa wax walba. Haddii aad rabto inaad abuurto isbeddel, markaa midabku wuu garaaci doonaa albaabkaaga, iyadoo la isku daray jijimooyin qurxin doona dhudhunkaaga hore.
Khadadka leh qurxintaFaahfaahinta marwalba way kordheysaa waxayna sameysan doontaa qaab shaqsiyeed. Waad dooran kartaa bucshiradda asalka ah ee, si uun, wax badan kaaga sheegta adiga iyo shakhsiyaddaada. Xiddigaha qaar, shimbiraha ama xarfaha hore ... waxaad leedahay eraygii ugu dambeeyay!
Khadadka leh saamaynta wehliyaha: Si aan ugu raaxeysanno isla asalka, waxna ma ahan in la sawiro hal xariiq laakiin tan xigta, oo leh a saamaynta gradient ama saameyn cakiran.
Khadadka jajaban: Mid kale oo ka mid ah qaababka ugu fiican tan nooca tattoos xariiqa gacanta, waa in la doorto khadadka jajaban. Mar walba maahan inaan sameyno nooc ka mid ah hoop dhameystiran, laakiin waxaad dooran kartaa istaroog madaxbannaan.
Khadadka qalooca: Haa, maxaa yeelay gooladaha iyo hirarka sidoo kale waxay noqon karaan halyeeyada khadadka gacanta. Waxyaabaha ay ku kala duwan yihiin ayaa xitaa iyaga ka sii qurux badan.
In kasta oo macnahaas waxoogaa mugdi ahi jiro, haddana wuxuu ka yimaadaa dhaqanka japaneseMa dhihi karno laakiin in nooca noocan oo kale ah uu marwalba la qabsado gacanta oo dhan lafteeda. Intaas waxaa sii dheer, iyagu ma kala duwanaanshaha weyn ee ragga iyo dumarka. Labaduba waxay la qabsan karaan dhadhankooda mid kasta oo ka mid ah naqshadaha. Fursadaha aasaasiga ah ee naqshadeynta oo aan u baahnayn inay weynaato ama midab badan yeelato, xitaa xaddiga weyn, si looga dhex muuqdo mid ka mid ah kuwa ugu cadcad dad badan.
Sawirada Tattoos ee gacanta oo leh Khadadka
Tattoos gacmaha hore: sifooyinka iyo talooyinka
Wadada buuxda ee maqaalka: Tattoo » Noocyada Tattoo-ka » Tattoos leh qaabab » Tattoo-xariiqa qaar ee gacanta
26 faallooyin, ka tag taada
Josh germosen dijo
Sababta ay ulaxiriirto dunida khaniisiinta ayaa ah maxaa yeelay waa kooxdan iyaga ka dhigtay kuwo moodada. Sababtoo ah? Hagaag, maxaa yeelay laga soo bilaabo 2013 markii qof walba saaray sawirka caadiga ah ee = tixraacaya ansixinta guurka khaniisiinta. Inbadan waxay bilaabeen inay ku sawiraan kan fudud = ilaa ay inbadan bilaabeen inay xiraan meeshaasna waxaa ka dhashay kororka nabarrada, in kasta oo dabcan taasi ay tahay wax uusan qof walba ogayn, waana sababta qaar badan, tusaale ahaan, loogu calaamadeeyay astaan ka mid ah maafiyada ruushka ah iyagoon ogayn, sida khadadka badankood ay ku taageerayaan guurka khaniisiinta xitaa laga yaabee iyagoon dan ka lahayn.
Jawaab Josh Germosen
Waa run in taatuuga xariijimaha ama xarkaha gacmaha lagu qaato ay inta badan qaateen dunida Gay. Si kastaba ha noqotee, maahan in kooxdani ay "soo bandhigtay" noocan ah tattoosyada. Waxay horeyba ujilayeen inbadan kahor intaysan bilaabin isticmaalkeeda. Sida iska cad, waxay wax badan ka caawiyeen kordhinta caannimadiisa. Salaan iyo mahadsanid faallooyinkaaga ;-).
Ku jawaab Antonio Fdez
Waad salaaman tahay, waxaan helay tattoo xariiqyo, oo ka kooban qad cufan aniga oo ka wakiil ah wiilkayga curadka, xariiq khafiif ah oo macnaheedu yahay noloshayda kahor iyo kadib, aniga oo aan ka fikirin dadka kale oo kaliya aniga qof ahaanta. kan saddexaadna wuu ka khafiifsan yahay kan koowaad wuuna ka ballaadhan yahay kan labaad magacayga wiilkayga ugu yar, waxaan u malaynayaa inaynu nahay khaniisiin, ama kuwa isku jinsiga ahi ay yihiin dad sida dadka kale oo dhan, waxaan nahay bini aadam awood u leh inaan ku faraxno sida aan nahay oo kale. mahadsanid adiga
Ku soo jawaab Libny
Waad ku saxantahay ereyadaada! Waxaad siisay macno shaqsiyadeed waana runti waxa ay ku saabsan tahay. In kasta oo mararka qaarkood astaamaha qaarkood ay la yimaadaan macno, mid walbana wuxuu u turjumi karaa noloshiisa, sidaad adiguba u samaysay, adiga oo sharfaya carruurtaada iyo naftaada.
Salaan iyo mahadsanid fikirkaaga aad nala wadaagtay 🙂
Jawaab Susana Godoy
Waxaan ka fekerayaa inaan labo jijimood ku sameeyo curcurka. Mid khafiifsan midna ka ballaadhan yahay, laakiin macnihiisu aad buu uga duwanaan doonaa kan dunida khaniisiinta ah. Waxay mid walba noqon doonaan carruurtayda. Kan ugu yar kan ugu yar iyo kan ugu ballaadhan kan ugu weyn
Waa fikrad weyn Javi. Waan hubaa in tatuuxu u muuqan doono wax weyn Intaas waxaa sii dheer, waxay lahaan doontaa macno shaqsiyadeed oo wanaagsan. Dhamaan wanaag!
Aniga waa isku macno aniga, waan ku guda jiraa howsha ... in kastoo aanan aad u xiisaynayn khaniisiinta
David T. dijo
Waxaan sidoo kale u sameeyay sababtaas darteed.
Jawaab David T.
Waxaan rabaa in aan sameeyo maxaa yeelay aniga ahaan macnaheedu waa mid fudud laakiin qalafsan, maxaa yeelay waxaan la hadlay farshaxanada tattoo mana ahan wax aad noogu fudud inaan dhahno sameysid xariiq toosan oo dib ugu laabaneysa gacanta, okay?
Ku jawaab pasetoox
Dhab ahaan, inkasta oo astaamahaani u muuqdaan kuwo aad ufudud in la sameeyo, aad bay u dhib badan yihiin. Mana aha wax fudud in la sameeyo xarriiq toosan oo, korka, gebi ahaanba u rogeysa gacanta si loo abuuro jijin. Dhamaan wanaag!
Macnaha waxaa bixin doona mid walba qaabkiisa iyo dhadhamintiisa, faahfaahinta ayaa ah inaad ku raacsan tahay khadadka iyo haysashadiisa, waxaa la sheegay in dadka Sicilia ay u adeegsadeen baal madow oo gacanta ah calaamad baroor diiq ah markii dambena waxay ahayd sidoo kale tattoo.
Waan jeclahay tattoos-ka waxaan haystaa dhowr, runta waxaan jecelahay naqshadda xariiqyada isku midka ah maxaa yeelay aniga aniga guurkeygu wuxuu ahaa sidan oo kale daqiiqad gaar ah oo aan si fiican isugu mid nahay laakiin mararka qaar isaga ama aniga waxaan ku dhex jirnaa hoos u dhac xagga nolosha ah oo had iyo jeer mid ka mid ah Labada joogitaankeyga oo leh maskax cad tan kale ayaa ah tan xooggeyga iyo daciifnimadeyda. Oo sidaas ayaannu nahay laakiin had iyo jeer labadeennuba waxaynu wadnaa isla xariiq ama jiheyn
Waad salaaman tihiin. Runtu waxay tahay, Uma maleynayo in tattoo sidan oo kale ah ay qeexeyso rabitaankaaga galmada, maadaama aan lahadlay dhowr qof oo heterosexual ah oo jecel qaabkan iyo inay sameyn lahaayeen, waxay leedahay macnaha ay leedahay, waana inay waa in la ogaadaa in haddii ay sabab u tahay taariikh dhowr ah qabiilooyinka asaliga ah ee Latin Ameerika ay adeegsadaan oo ay u adeegsadaan xariiqyo isbarbar socda naqshadaha wakiillada dharka iyo alaabada, sidoo kale naqshada waxaa loo isticmaalaa in lagu calaamadeeyo jirkooda cibaadooyinka kala duwan ee ilaahyadooda, cibaadadooda iyo dabaaldegyadooda; Waxay tan samaynayeen in ka badan 2000 sano markaa waa astaan ​​gabowday oo wax cusub ma aha, laakiin waa wax aad loo qurxiyo.
Shakhsiyan, waan toosanahay waxaanan u adeegsaday inaan ku daboolo tattoo kale oo jiray 13 sano in kabadan oo runtii ahaa musiibo waxayna umuuqatay naqshad wanaagsan sabab la mid ah taas oo iila muuqanaysa inay astaan ​​u tahay koox diimeed kasta , koox, fasal bulsheed ama Freemasonry, laakiin wali waxaan u maleynayaa in qofku uusan wax badan ka fekerin dadka kale si loo sawiro haddii macnaha shaqsiyadeed uu yahay waxa muhiimka ah.
Alexander Nunez dijo
Waxaan leeyahay laba wareeg oo ku wareegsan gacanta bidix. Mid siman oo matalaya waqtiga xaadirka ah iyo mid madoow oo matalaya mustaqbalka la dhisayo.
Jawaab Alejandro Nuñez
Wigetta: v dijo
Waxaan baarayaa tan, maxaa yeelay dhowr bilood ka hor qof loo tixgeliyey inuu caan yahay, wuxuu sameeyay fiidiyoow kaas oo lagu xujeeyay inuu ku sawiro jidhkiisa astaamaha uu jeclaan lahaa inuu yeesho, mid walbana wuxuu siiyay macnihiisa, marka laga reebo nabrahan.
Taageerayaashiisa (aniga oo aan kujiro), waxaan ku mashquulsan nahay arinta ah inuu yahay Gay isla markaana uu leeyahay lammaane, taas oo uusan waxba ka oran, sida iska cad waa fikradahayaga, waxba kamuu sheegin inuu yahay Gay, ama lamaane aan leeyahay, laakiin , Qof ayaa helay sawir ay ku sheegeen in Garaacisyada gacanta bidix ay muujinayaan u jeedkiisa xagga galmada ee dhinaca Gay, iyo, in kastoo aan jeclaan lahaa * - * inuu xaqiijiyo inuu yahay Gay <3 iyo in saaxiibkiis yahay "-"] aniga, uma maleynayo inay taasi micnaheedu tahay.
Waad ku mahadsan tahay macluumaadka ay wax badan i caawiyeen, waxaan rajeynayaa mana aanan ku daalin arimahayga; -;
Jawaab Wigetta: v
qawlaysatada madoow macnaheedu maaha khaniisnimada, saaxiibo badan oo khaniisiin ah oo asxaabteyda ah ayaa xirta iyaga iyo dhowr qof oo caan ah oo aan khaniis aheyn iyo sidoo kale tyres joseph iyo paulo dybala. sida kor ku xusan waa halyeey reer magaal ah
ANTONIO OSORIO dijo
WAXAAN TATTOOOOODAY LABADAN LIIDOOD EE CULIMADA AH IYO QAARKA TAHANKA DHEXE DHEXdooda, INTA KA BADAN LIX SANO KAhor IYO KII KASTA OO SIIYO MACNAHA AY RABAAN IN LOO SIIYO SI AAD U WAALIDKAY UGU SOO BAXDO MAGAALADANA TAHAY WAAN AHAY! XAQIIJO !!!!
Kujawaab ANTONIO OSORIO
Qiimaha Fran dijo
Sida ku xusan baloog aan ka helay, dhaqankeenna reer Galbeedka oo lagu xidho jijimad madow oo la tolay ama lagu dhejiyay dharka ayaa calaamad u ah baroor-diiqda qofkii uu jeclaa geeridooda ka dib. Si loo xasuusto saaxiibkaa lumay ama xubinta qoyska ka mid ah inta ka hartay mudada dharka marada ah, dad badan ayaa doorta inay shaati gacmeedyo madow ku xardhaan maqaarkooda. Waxay u noqon doontaa xusuusin iyo maamuus joogto ah qof gaar ah.
Waxay la xiriirtaa baroor diiq iyo rafaad.
Jawiga militariga, waxay tixraaci karaan dagaalada ama guulaha la soo maray, ama luminta asxaabta ama asxaabta goobta dagaalka.
Waxaa sidoo kale loo adeegsadaa dejinta yoolalka iyo dhiirigelinta shaqsiyadeed. Waxay tixraaci karaan tirada guulaha iyo yoolalka shaqsiyeed ee qof gaadhay ama wali doonayo inuu gaaro. Waa waano inaadan ka quusan wixii aan damacnay.
Qaar ka mid ah qabiilooyinka asaliga ah waxay adeegsadaan karbaash si ay ugu diyaar garoobaan dagaallo si ay u cabsi geliyaan kuwa ka soo horjeeda. Kuwa kale, waxay sidoo kale u adeegaan inay muujiyaan booska qabiilka dhexdiisa, tirada jeexjeexyada / baandooyinka iyo meesha meydka lagu calaamadeeyay, waxay ka tarjumaysaa darajada uu xubinta qabiilku haysto.
Jawaab Valor Fran
Adiga laftaada ayaa siinaya macnaha madaama asalkiisa aan la aqoon laakiin hadaan sawiro, macno ayey siin laheyd waxaan rabaa in maqaarkeyga lagu xardho aniga ahaanna wuxuu ii noqon lahaa nabar aan qabo waligiisna xiri doonin
Waad salaaman tahay, waan sameeyay oo ma aqaan macnahooda, waxaan u sameeyay si fudud maxaa yeelay waan ka helay iyaga dabcan mid walbana macnihiisa ayuu siinayaa
Tattoo-ga wax macno ah malahan, tattoo-ga laftiisa ayaa loo sameeyay si mid walboo macnihiisa u dhigo
Sidee ayey tahay habka saxda ah ee loo sameeyo tatooyadaas si aysan u qalloocin
Nabade Carlos !.
Noocyada noocan oo kale ah ayaa leh 'tabaha' ay farshaxan-yahannadu ku dhaqmaan. Dhinaca kale, waa inay doortaan cirbad gaar ah si ay u sameeyaan naqshad nuucaan ah iyo iyada oo ah, sanqad ku habboon dhumucda irbadda. Intaas waxaa sii dheer, xasiloonida wanaagsan, 'qabashada' ayaa naga caawin doonta. Tan ugu fiican ayaa ah tan ugu raaxada badan in la qabto. Dhinaca kale, mashiinnada la hagaajiyay, fidinta maqaarka ka hor intaan la xariiqin xariiq kasta, iwm. waa kuwa talaabooyinka aasaasiga ah ee loo baahan yahay si loo helo natiijo wanaagsan. Tababbarku wuxuu kaloo ka dhigayaa noocyada noocan ah ee loo yaqaan 'tattoos' inay u muuqdaan kuwo qumman.
Waxaan rajeynayaa inaan cadeeyay shakigaaga qaar 😉
Aad baad ugu mahadsantahay faallada.
Waxaan ku helay Tattoo noocan ah oo leh 1 xariijimo qaro weyn oo ku yaal gacanta hore si aan u matalo dhamaan waqtiyadii aan naftayda jaray iyo maalmihii aan soo dhibtoonayay oo aanan waxba ka ahayn geerida.
Ku jawaab Sebastian
Waa salaaman tahay Sebastian!
Sidaad u tiri, mid kastaa wuxuu leeyahay matalaadkiisa sawirka sidaasna, wuxuu siinayaa macnaheeda. Waxaan rajaynayaa in waqtiyadaas xun, ee aad sheegaysid, ay naga dambeeyaan. Had iyo jeer horay u fiiri!
Aad baad ugu mahadsantahay inaad nala wadaagto sheekadaada!
Waxaan hayaa aragti ah in tattoo-gaan qaaska ah ay leeyihiin raggaas oo jecel inay feedh yeeshaan waana taasi calaamadda intee in le'eg ee ay tahay in cududda ay ku kacdo dhaqankaas jinsiyeed ee u noqon kara ragga toosan iyo ragga labadaba.
Uruurinta tattoos barroosinka, oo imanaya meeshii aan u soconnay
Tattoo tattoo, calaamadaha burji